Kaominina Beforona-Moramanga : faritra mena amin’ny lafin-javatra maro | NewsMada
Kaominina Beforona-Moramanga : faritra mena amin’ny lafin-javatra maro
Azo sokajiana ho faritra mena amin’ny lozam-pifamoivoizana, fandripahana ala arovana, tsy fandriampahalemana,valan’ aretina tsy fantara, ny kaominina Beforona. Na izany aza, mikaroka ny fomba hampandrosoana maharitra ny kaominina ny ben’ny Tanàna, Rasolonirina Alphonse.
Nanambara ny ben’ny Tanànan’ny kaominina ambanivohitra Beforona, distrika Moramanga, faritra Alaotra Mangoro, Rasolonirina Alphonse fa mitana ny laharana voalohany amin’ny lozam-pifamoivoizana amin’ ny lalam-pirenena faharoa (RN 2) iny ny eo Beforona. Nanamafy izany ny lehiben’ny zandary ao an-toerana, ny GP1C Andrianjafimananjara Chamarly Aurélien, fa 5 kilometatra mialohan’ny fidirana an’ i Beforona raha avy any Toamasina ary 5 kilometatra ihany koa raha avy ety Moramanga, malama ny godirao, mahatonga ny lozam-pifamoivoizana miseho matetika mialoha ny fidirana an’ i Beforona, Notsorin’izy roalahy ireo fa azo sokajiana ho faritra mena amin’ny lozam-pifamoivoizana amin’ ity lalam-pirenena faharoa ity ny eto Beforona. Samy nanambara ny roa tonta fa ilaina ny fisian’ny fiara mpitondra marary sy hanampiana mpitsabo miasa ho an’ ity kaominina ity satria ain’ olona no lalaovina amin’ ireny maratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana ireny.
Mandrahona hametra-pialana faobe ny VOI
Mahazo vahana koa ny fandripahana ala ao amin’ny ala arovana Ambatoaranana sy Vohidrazana hatrany Ambodilaingo sy Ambohimiandana, samy anatin’ny kaominina Beforona ihany. Vokany, mandrahona ny hanao fametraham-pialana faobe ireo vondron’ olona ifotony (VOI), misahana ny fiarovana ny ala samy ao anatin’ny faritra arovana Ankeniheny zahamena (Caz). “Tsy misy afa-tsy 25 ny isanay. Mahery vaika anefa ny fandrahonana ataon’ ireo mpandripaka ny ala, izay samy mpiara-monina ihany. Izahay mpikambana VOI anefa tsy mahazo tohana avy amin’ny mpiahy anay“, hoy Ramanatrihasina Bernard, filoha lefitry ny VOI Rianala ao Ambatoaranana, notronin’ny mpikambana VOI avy amin’ ny faritra hafa. Mampanahy, noho izany, ny hoavin’ ny ala arovana iandraiketan’ ireto VOI iharan’ny tsindry mafy avy amin’ny mpandripaka ala ireto raha mametra-pialana tokoa izy rehetra . Amin’ny akapobeny, efa ripaka tanteraka ny ala arovana any an-toerana.
Ankoatra ireo, mamely mafy ny mponina ao Maromitety ny valan’ aretina tsy fanta-piavina, mandripaka ain’ olona ary efa ampolony ny marary. Tsy ampy ny fanentanana hanatonana ny toeram-pitsaboana, ka mirona manatona mpitsabo nentin-drazana ny mponina.
Hanamboatra fotodrafitrasa vaovao
Ben’ny Tanàna efa nitondra an’ ity kaominina ity ihany i Rasolonirina Alphonse, tany aloha kely. “Hatreto aloha, manana fandaharanasa hametrahana fampandrosoana maharitra ny kaominina ny tenako ary hatomboka amin’ny fanamboarana fotodrafirasa vaovao. Anisan’ izany ny biraon’ny kaominina sy liseam-panjakana. Eo koa ny fiarovana ny tontolo iainana iarahana amin’ny VOI, satria ao ny karbôna sy ny rivotra madio, ohatra”, hoy izy.
Lahatsoratra sy sary: Sajo
Maherin’ny 25.000 ny mponina ao Beforona, ao anaty velarantany 457,71 km2; ahitana fokontany 13 sy vohitra 86. Fidiram-bolan’ny mponina ny fambolena sakamalao sy akondro, miampy ny fikapana hazo.